DAAWO MUUQAAL: Cali Xaraare oo Falanqaynaya Wasiirada Cusub ee Puntland iyo Kacdoonka lagu diiday | KALSHAALE
DAAWO MUUQAAL: Cali Xaraare oo Falanqaynaya Wasiirada Cusub ee Puntland iyo Kacdoonka lagu diiday
Feb 14, 2019 - 4 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Wariye Cali Xaraare ayaa siwayn u Falanqeeyay Golaha Wasiirada Cusub ee Puntland, Wuxuuna sidoo kale Barnaamijka ku lafaguray Kacdoono looga soo Horjeedo Xukuumadda Cusub oo ay wadaan Qaar kamid ah Beelihii wada dhistay Puntland.
Madaxwaynaha Cusub ee Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa dhowaan ku dhowaaqay Golaha Wasiirada Cusub ee Puntland, Waxaana Hubaal ah inaan Bulshada Xilku deeqin ee waxqabadku deeqo,
Waxaana muuqata inaan dhibaatada isqab-qabsiga laga bixi doonin, ilaa looga Gudbo Xisbiyo loo dhan yahay , oo meel la iska dhigo Shaadhka Qabyaaladda ee 1998-dii lagu dhisay Puntland, hadana weli wax lagu Qaybsanayo.
Waa fiican tahay in dadka waxqy tabanayaan ka hadlaan oo mudaharadaan.
Aduunka intaan joogay qof Tiinle ah ma arag, maantana waxaa ii cadaatay in Tulo Kaladhac, weligey maqal keligood degaan.
Meesha 100 belood dega haddii laba jeer ilaa 30 jego wax ka heleen laba duufsiin, fikirkayga.
Jago qabiilkaaga wax ku tarimayso ee waxa horumar, caafimad waxbarasho iyo horumar dhaqaale loo qabto ayaa deeqa.
Dad aqli xumaa, daanyeerkaan Minosota ka towtowleh, fuck off halugu yiraado.
Sheekadaan waxaan ka bartay in qabiilka Tiinle oo maqlay hadda ka hor laakiin meel degaan aqoon, in Warsangeli la degaan oo dhulkii British Somaliland degaan.
In Dhulbahante iyo Warsangeli keliya degin oo qabiil saddexaad oo Harti ah jiro..kkkkkkkk
Tollow Somaliland jago ma ka hayaan…
Hartigii badnaa ayeyba wax fiican siin ee ma Tiinle ayey waxsiin..kkkkkkk,
war lafaha yaryar haloo sad buriyo.
Reer Puntland waa dadka ugu fiican madaxweyne loo noqdo, waa dowlad adeec.
17 wasiir oo 100 beelood loo qaybiyey haddii Tiinle keliya cabanayo ayaa tusaale idiinku filan.
Dadka jago ma deeqdo ee horumar, amni iyo waxqabad ayaa deeqa.
Dhista dhulkiina oo buuqa joojiya.
Asc meeshii kalshaale.com waa xumaatay
Ama aan idhaahdo wariye yaal xariifa ma hayso waxaan leeyay kalshaalaw baryahan dambe warkiinu ma fiicna ee saaxiibayaal ama aan idiinsoo gurmano dee ama keena wax aan ka doodno midkale cali xaraare iyo afartan habrood miyaydan ka ilbixin
Bal hada u fiirsada wararka calamka ka socda sida
Jabhada olf iyo
doorashada golaadhexe iyo gudoomiyaha xusbiga kulmiye oo balo ka taagantay
Midkale sadexdaa jabhadood waxaan
U taageray waxa weeye shaqo aan yarayn ayay hayaan
(1) alshabaab waxay difaacda cadawga ku soo duulay koonfur somali sida? Kiinya ithopia burundi iyo waxay cago ku qaatan
Oo hadanay alshabaab jirin waa hore ayaa koonfur la qaadanlee ta labaad
(2) jabhada olf iyaduna sidoo kale waxay haysaa shaqo fiican oo ah in aan cadawgu qaadan somali ithopia ta sadexaad